अभिनेता अनुपविक्रमलाई ७ प्रश्नः कस्ती प्रेमिकाको खोजीमा हुनुहुन्छ? - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अभिनेता अनुपविक्रमलाई ७ प्रश्नः कस्ती प्रेमिकाको खोजीमा हुनुहुन्छ?
मोडलिङबाट करियर सुरु गरेका नायक अनुपविक्रम शाही चलचित्र ‘हँसिया’मार्फत फिल्मी दुनियामा प्रवेश गरेका हुन।
त्यसपछि उनले ‘ठमेल डटकम’, ‘हाउ फन्नी’, ‘वीर विक्रम’ लगायतका दर्जन फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। कुनै समय ‘ह्यान्सम भिलेन’को रुपमा सिने क्षेत्रमा जमेका अनुपले अहिले ‘ह्यान्सम हिरो’ को रुपमा आफ्नो परिचय बनाएका छन्। भिलेन होस् या हिरोको रुपमा हरेक फिल्ममा उनको भूमिकालाई लिएर तारिफ हुने गर्छ। उनको पछिल्लो फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ शुक्रबारबाट प्रदर्शनीमा आउँदै छ । यसै सन्दर्भमा उनलाई नेपालखबरका कृष्ण आचार्यले ७ प्रश्न गरेका छन्ः
१. फिल्मबाहेक कुन कुरामा तपाईंको बढी रुची छ?
मलाई यात्रा गर्न निकै मन पर्छ। प्राकृतिक रुपमा मनोरम स्थलहरु मेरो रोजाइमा पर्छन्। त्यस्तै विदेशतिरको यात्रामा पनि म बढी रमाउँछु।
२. घरमा एक्लै हुँदा के गर्न मन पर्छ?
धेरैजसो त गीतहरु नै सुन्छु। कुकिङ पनि गर्छु। विशेषगरी नेपाली खानाहरु बनाउन एकदमै मन पर्छ। बनाइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्ने र योगा गर्ने पनि गर्छु। समय, परिस्थिति र मुडअनुसार के गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ।
३. आफ्नो प्रेमिका वा श्रीमातीबारे कुनै धारणा बनाउनु भएको छ? यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने?
त्यस्तो कुनै धारणा बनाएको छैन। म अहिले आफ्नो करियरमै फोकस छु। अझै ४–५ वर्ष बिहे गर्ने पक्षमा म छैन। त्यसपछि के हुन्छ हेरौँला।
४. जीवनमा कत्तिको रुनुहुन्छ? रुँदा आनन्द आउँछ कि हाँस्दा?
रुनु र हाँस्नु समयको खेल हो भन्ने लाग्छ। मानिसलाई समय र परिस्थितिले रुवाइदिन्छ। म पनि रुन्छु होला। तर, पछिल्लो पटक कहिले रोएँ भन्ने याद छैन। दुई दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के नै छ र जस्तो लाग्छ। त्यसैले म हाँसीहाँसी बाँच्न मन पराउँछु। हाँस्दाको आनन्द नै बेग्लै छ।
५. आफूलाई मन पर्ने र नपर्ने आफ्नै बानी ?
अरुले मलाई मेरो सहयोगी भावना मन पर्ने बताउँछन्। म परेको बेला सकेसम्म सबैलाई सहयोग गर्छु। यो मेरो कमजोरी हो वा विशेषता त्यो भने मलाई थाहा छैन। मन नपर्ने भने म अलि अल्छी छुजस्तो लाग्छ। ८–१० घन्टा सुत्नुपर्छ।
६. जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षण सम्झनु पर्दा कुन सम्झनुहुन्छ र किन?
आमाको कोखबाट जन्म लिँदाको क्षण सबैभन्दा विशेष हो मेरा लागि। अर्को भनेको पुरुषहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘म्यान हन्ट इन्टरनेसनल–२०१३’ को विजेता बन्दाको क्षण हो। मेरो करियरको सुरुवात त्यहीँबाट भएको मान्छु म। विजेता भएर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनु र आफूलाई विश्वसामू चिनाउन पाउनु मेरा लागि ठूलो अवसर थियो। जसलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ।
७. ‘पुरानो बुलेट’ बाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ?
सबैले आफूले गरेको कामबाट राम्रै आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यस्तै, मेरो अभिनय रहेको यो फिल्मबाट पनि मैले राम्रै अपेक्षा गरेको छु। अपेक्षा गर्नु र फिल्म चल्नु या नचल्नु फरक पाटो हुन्। कुनै पनि काम गरेपछि सफल या असफल दुवै हुन सकिन्छ। फिल्मलाई पनि दर्शकले मन पराउनुपर्छ। फिल्म राम्रो बनेको छ, अब अरु कुरा प्रतिक्रिया आएपछि मात्र थाहा होला।
प्रकाशित ३० फागुन २०७५, बिहिबार | 2019-03-14 17:49:10
फिल्म स्टार प्रकाशले जमानत बचाउन सकेनन्
साउथ इन्डियन चलचित्रका स्टार कलाकार प्रकाश राजको लोकसभा निर्वाचनमा जमानत जफत भएको छ।
‘सुन्दर सिर्जनाका लागि स्वस्थ कलाकार’
संगीतकार संघ नेपालले जेठ १८ गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ।
भारतीय निर्वाचनमा कलाकारः भाजपाबाट टिकट पाउनेले जिते, कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नेको पत्तासाफ
भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा हेर्दा संसदमा सिने क्षेत्रका कलाकार र संगीतकर्मीले पनि राम्रै उपस्थिति जनाउने भएका छन्।
पूर्व मिस नेपाल अश्मि श्रेष्ठले आफू भारतीय गायक सनम पुरीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलासा गरेकी छन्।
भारतमा मतगणना चल्दै गर्दा सनी लियोनी ट्रेन्डिङमा!
भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेला बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनी टप ट्रेन्डिङमा पुगेकी छन्।
श्रवण सम्राटकाे 'तिम्राे हाँसाे' सार्वजनिक (भिडियाे)
गायक राजेश पायल राई र सविना केसीकाे स्वरमा 'तिम्राे हाँसाे' गीतकाे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ।